I-China Mini yokuchaneka okuphezulu kwe-14 entloko ye-headline ubunzima beembewu ze-cannabis zefektri kunye nabavelisi | Isisindo esifanelekileyo
Ukuchaneka okuncinci okuphezulu kwe-14 kwintloko yemilinganiselo emininzi yeembewu zeti yentsangu
I-Mini 14 entloko enobunzima obuyi-0.5L hopper, inokuchaneka okuphezulu kunentloko eyi-14. Iyakwazi ukulinganisa iti, imbewu kunye ne-cannabis.
Umthamo weH Hopper: I-0.5L
7 ”isikrini sokuchukumisa
Isikali esincinci se-Mini 14 kufanelekile iti, imbewu, i-chili kunye nokunye. Olu hlobo lweemveliso lucela ukuchaneka okuphezulu kakhulu ukugcina iindleko.
Imbewu ye Chilli
• I-0.5L nditsho ne-0.3L hopper kwiimveliso ezincinci.
Inkqubo yolawulo lwebhodi ezinzileyo ezinescreen.
• Ubume obahlukeneyo bokutya kweepani zemveliso zeempawu ezahlukeneyo.
• Ikhamera enganyanzelekanga kumgangatho wokubeka iliso ekusebenzeni komlinganisi.
Edlulileyo: Umatshini wetray denester wokupakisha umatshini